Dargaggoonni Oromoo Torontoo hiriira mormii fi sagantaa dungoo qopheessan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dargaggoonni Oromoo Torontoo hiriira mormii fi sagantaa dungoo qopheessan
Dargaggoonni Oromoo magaalaa Toroontoo mormii maaster pilaanii Finfinnee hordofee ajjeechaa fi gidiraa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irraan gayaa jiru balaaleffachuudhaaf guyyaa 29.12.2015’tti hiriira mormii qopheessan. Oromoonni Toroontoo fi naannawa isii jiraatan hundis akka hiriira mormii kana irraa qooda fudhatan waamicha dhiheessaniiru.
Barattotaa fi Oromoota biroo kanniin falmaa mirgaa, haqaa fi qabeenya isaanii irratti woreegaman yaadachuufis sagantaa dungoo qabsiisuu qopheessuun isaanii hubatameera. Worri sagantaa kana qopheessaa jirus, namoonni hiriira kana irratti argaman hundi gadda isaanii argisiisuuf akka tolu uffata gurraacha uffatanii akka dhufan waamicha kabajaa hundaaf dhiyessu. Hiriira kanatti daran sinboo horuuf jecha hirmaattonni alaabaa Oromoo fi dhaadannoo isaanii qabatanii akka dhufan gaafatan. Kanniin Oromiyatti dhumaa jiran barattoota umriin xixiqqoo ta’an ta’uu isaa addunyatti agarsiisuuf jecha, barattoonni Toroontoo fi naannawa isii jiraatan boorsaa fi kitaaba isaanii qabatanii hiriiricha irraa qooda akka fudhatanis gaafatu, qopheessitoonni hiriira kanaa.
Hiriirri mormii kuni kan geggeeffamu sa’aa 1pm Queen’s Park (University and Wellesley) itti.
Guutuu ergaa Gurmuu Dargaggoo Oromoo Toroontoo isa Afaan Oromoo fi English as bira cuqaasuudhaan dubbisaa.
Previous articleBlood and terror on the streets as protests grip Ethiopia|AFP
Next articleOromiyaa keessatti hiriirri mormiis, ajjeechaanis akkuma itti fufetti